Ikhaya iimveliso DataNumen Outlook Repair Isixhobo sokulungisa i-inbox sixhomekeke
Isixhobo sokuLungisa i-inbox sixhonywe xa kulungiswa iiFayile zePST ezonakeleyo okanye ezonakalisiweyo
Xa usebenzisa i-Outlook Inbox Repair Tool (Scanpst.exe) ukulungisa ifayile eyonakeleyo okanye eyonakeleyo yeefayile zangasese (PST), endaweni yokwenza umsebenzi wokulungisa, isixhobo sixhomekeke ngokungapheliyo kwaye asiphenduli kwimiyalelo yomsebenzisi. Ukuba uvula uMphathi weMisebenzi yeWindows, uyakufumana imeko yesicelo esithi "Ayiphenduli". Ukuba ucima isicelo ngokungaqhelekanga kwaye uphinde u-restarUkulungisa kwakhona ifayile enye, uya kuhlala ufumana iziphumo ezifanayo.
Urhwaphilizo okanye ukonakala kwefayile ye-PST inzima kakhulu kwaye inzima. Xa Isixhobo sokulungisa i-inbox (Scanpst) sizama ukulungisa le fayile, iya kuthi gqi kwiziporo ezifileyo ngokungapheliyo kwaye ayinakuphinda iyilungise ifayile.
Kuya kufuneka usebenzise DataNumen Outlook Repair ukulungisa ifayile yePST eyonakeleyo. Inkqubo ephucukileyo kunye neendlela zealgorithm, DataNumen Outlook Repair ndiya kuhlala ndibuyisela i-most Kwifom yedatha enokuphinda ifumaneke ifayile yePST eyonakeleyo, ke sesona sixhobo silungileyo sokubuyisela i-Outlook kwintengiso.